Fialàna faobe nataon’ny mpanoratra an-gazetin’ny Hong Kong TV rehefa voaroaka ny 40 amin’ny mpiara-miasa amin-dry zareo · Global Voices teny Malagasy
Antony ara-bola hoy ny famoaham-baovao, politika hoy ny ekipan'ny efi-panoratana.
Voadika ny 11 Desambra 2020 4:47 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Italiano, Español, Français, polski, English
Mpanoratra an-gazety maro no nanolotra ny taratasy fialàny ho fanoherana ny fandroahana faobe ao amin'ny ekipam-panoratana i-Cable. Saripikan'ny Stand News. Nahazoana alalana.
Mihoatra ny folo ireo mpanoratra an-gazety niala tamin'ny asany tamin'ny 1 desambra avy ao amin'ny Hong Kong Cable Television Limited, tobim-pahitalavitra lehibe iray famandrika ao Hong Kong, ho fanoherana ny fandroahan'ny orinasa fampitam-baovao ny ekipam-panoratana 40 amin'ny jerena ho famoretana ara-politika.
Hita ao amin'ireo nalefa ny lehiben'ny birao China sy ny ekipa manontolo nahazo loka tamin'ny Programa News Lancet. Notononin'ny famoaham-baovao ho antony ara-bola ny anton'ny fandroahana, filazana izay tsipahin'ny ekipan'ny efi-panoratana.
Niala avokoa ny birao China iray manontolo ho fanoherana, ahitana 12 isa ny fitambarany, miaraka amin'ny lehiben'ny birao iraisampirenena sy fitantanam-bola sy ny lehiben'ny efi-panoratana mamita iraka.
Fantatra ihany koa amin'ny hoe i-Cable, fantatra ihany koa ny Hong Kong Cable Television Limited amin'ny hatsaran'ny tatitra fanadihadiana momba an'i Hong Kong sy Tanibe. Tamin'ny fotoana nampirongatra ny COVID-19 tao Wuhan, io irery ny seha-baovao ao Hong Kong manana masoivoho ao an-tanàna. Noderaina ihany koa ny efi-panoratana tamin'ny fitaterana ny hetsika fanoherana fampodiana olona [ho ao Shina] tamin'ny taona 2019-2020.
Nanao fanadihadiana ireo trangan-kerisetra nataon'ny polisy nandritra ny hetsi-panoherana ny News Lancet, tafiditra amin'izany ny fanafihana andian'olona tao amin'ny garan-dalamby Yuen Long tamin'ny 21 jolay tamin'ny herintaona. Ny fizaran-tantara farany indrindra tamin'ny raharaha, nalefa tamin'ny 24 novambra, dia nifantoka tamin'ny fitsapan-kevitra mampiahiahy notanterahan'ny orinasam-pikarohana pro-Beijing. Nilaza ny iray amin'ireo orinasa fa ny WeChat, sehatra fampitam-baovam-piaraha-monina anaovan'ny Hongkongers pro-demaokrasia no nanangonana ny valiny.
Tampoka sy nihatra eo noho eo ny fandroahana faobe — nilazana ireo noroahina hiala ny birao io andro io ihany. Tohina ny mpiasa ka nivory ivelan'ny efitry ny talem-baovao mitaky fanazavana. Naka sary sy namoaka izany fotoana izany i @galileocheng:
Nandroaka mpiasan'ny departemanta miisa 40 ny @icablenews. Miady varotra amin'ny mpitantana ny mpiasa amin'izao fotoana izao. (Sary nomena)
Anisan'ireo noroahina i Wong Lai-ping, tale lefitra famoahambaovao China teo aloha. Nandritra ny antsafa radio nalefa tamin'ny 2 desambra, notsipahany ny filazàn'ny fitantanana fa natao izao fanapahan-kevitra izao noho ny olana ara-bola, ary nanome fanamarihana fa tamin'ny volana aogositra, noroahan'ny fitantanana ny tale mpanatanteraka Fung Tak-hung tamin'izany fotoana izany ka mpitantana vaova miisa efatra no nasolo azy.
Handroaka Fung Tak-Hung iray ho takalon'ny mpitantana ambony miisa efatra? Ahoana moa izany ny karama fanampiny ho an'ny olona efatra mihoatra ny karaman'i Fung?
Nilaza i Wong fa matetika ny mpitantana vaovao mitaky zotram-baovao, toy ny fandefasana mivantana ny valan-dresaka ho an'ny gazety fanaon'ny minisitry ny raharaham-bahiny ao Shina, na manova ny lohateny. Araka ny nolazain'i Wong, tsy nanaiky ny hanatontosa izany fitakiana izany ny ekipam-panoratana.
Naneho ny heviny tamin'ny fandroahana ny Fikambanan'ny mpanoratra an-gazety Hong Kong:
Amin'ny fahitana ny fitateran'ny ekipa [New Lancet] ny polisy sy ny fitantanam-panjakana, sarotra ny tsy hijery izany hanaovana izay hanakelezana indrindra ireo tatitra saropady amin'ny anaran'ny fampihenana ny fandaniana.
Nisioka i @XinqiSu masoivohom-baovaon'ny AFP ao Hong Kong:
Amin'izao famoizana ny News Lancet sy ny ho famoizana ny iCable China News izany, ireto avy ireo programam-baovao TV mpanao fanadihadiana sisa tavela eto HK:
RTHK – HK Connection (tsaraina ny mpanatontosa)
NOW TV – Now Report (vao 4 taona)
TVB – News Magazine & Sunday Report (famitinam-baovao kokoa fa tsy fanadihadiana loatra)
Nifampizaràna betsaka ihany koa ny sariitatra sy sary-sy-soratra (memes) mitsikera izao fandroahana izao:
Miharihary ny maha-politika ny fandroahana. Mahazatra ireo mpanoratra an-gazety sy ny ekipa ao aminy ny mitatitra ny kolikoly sy ny laingan'i Shina. Tsy tian'ny AKS ho fantatry ny vahoaka ny marina, ary ny fandroahana no mamadika ny i-Cable TV ho lasa iray amin'ny milina propagandin'i Shina.
Ah amin’ “Iza no matahotra an'i Lancet?”